cadnaan kapul – Page 2 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Haweeney Caawa Lagu Dilay Magaaladda Muqdisho
Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil caawa ka dhacay degmadda Boondheere ee Gobolka Banaadir gaar ahaan Xaafadda Maana Booliyo. Dilkaan ayaa loo geystay Baxsan Booley oo kamid aheyd haweenka Degmadda Boondheere,sidoo kalana kamid aheyd ergadii xildhibaanadda baarlamaanka haatan jira soo dooratay. Sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal kooxo bastooladdo ku hubeysnaa ayaa fuliyay dilka Haweeneyda xili ay ku sugneed goob ...
Akhriso:-Farmaajo iyo Uhuru Kenyata oo Qodobo Ku Heshiiyay
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha Kenya Mudane Uhuru Kenyatta ayaa saaka wada hadallo mira dhal ah ku yeeshay Aqalka Madaxtooyada Kenya. Ajandaha wada hadalladan oo ku koobnaa xal u helista mugdiga diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa madaxweynayaashu waxa ay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo, lana xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood, kaasoo ku ...
Faah-faahin:-Ganacsade, Ganacsade Kale Ku Dhaawacay Suuqa Bakaaraha
Faah-faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Ganacsade, Ganacsade kale barqanimadii maanta ku dhaawacay Suuqa Bakaaraha ee Magaaladda Muqdisho. Falkaan ayaa ka dhacay agagaarka Hoteelka Shaam ee ku yaala Wadada labaad ee Suuqa Bakaaraha. Sida ay inoo xaqiijiyeen qaar kamid ah Ganacsatadda Suuqa, Labadda ganacsade ayaa khilaaf uu ka dhaxeeyay,waxayna taasi keentay in ay Bastooladdo isku qaataan islamarkaana ay isku rasaaseeyaan ...
War DEG DEG:-Toogasho Goordhaweyd Ka Dhacday Muqdisho
Kooxo hubeysnaa ayaa goordhaweyd askari ka Tirsanaa Ciidamadda Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay ku dileen Magaaladda Muqdisho. Dilkaan ayaa ka dhacay Degmadda Xamar Jajab ee Gobolka Banaadir gaar ahaan Suuqa Ansalooti. Sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal dhalinyaro bastooladdo ku hubeysneyd ayaa fulisay dilka askariga waxayna ka baxsadeen goobta uu dilka ka Dhacay. Ciidamadda Dowladda Soomaaliya oo goobta gaaray ayaa ku ...
Pakistaan oo Soo Riday Diyaarado Hindiya Leedahay+Sawirro
Dawladda Pakistan ayaa sheegtay in ay soo ridday labo diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ay leedahahay Hindiya kuwaas oo soo galay hawadeeda Kashmir. Pakistan ayaa intaas ku dartay in ay xirtay mid ka mid ah duuliyeyaashi diyaaradaha. Sareeye gaas Asif Ghafoor ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha ay ku soo dhacday dhulka ay Pakistan maamusho halka midda ...
Akhriso:-DFS oo Sheegtay in La Dilay 40 Ka Tirsanaa Al-shabaab
Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya ee Danab oo taageero ka helaya Ciidamo Mareykan ah ayaa Howlgal qorsheysan ka fuliyay degaano ka tirsan gobolka hiiraan waxa ay ku dileen dagaalyahano iyo saraaki ka tirsan Al-shabaab Howlgalka ayaa laga fuliyay degaanada Orantan masaaro jabis dhiri maadle miir cado garxamud wab galeey, Afar irdood oo ka wada tirsan gobolka Hiiraan halkaasi oo la sheegay in ...
War DEG DEG:-Nin Odey ahaa oo Lagu Dilay Muqdisho
Kooxo hubeysnaa ayaa goordhaweyd Magaaladda Muqdisho waxa ay ku dileen Nin Odey ahaa. Dilkaa ayaa ka dhacay Suuqa Xamar Weyne ee Gobolka Banaadir waxaana ninka odeyga ahaa ee la dilay uu iibin jirey dharka loo yaqaan (Carwo Istaaga). Sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal halkaas ku sugnaa, kooxaha hubeysnaa ayaa dhowr Xabadood la dhacay Ninka odeyga ahaa waxayna ka baxsadeen goobta ...
Faahfaahin:-Gudoomiye Lagu Weeraray Magaaladda Muqdisho
Faah-faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar maanta ka dhacay Magaaladda Muqdisho. Kooxo hubeysnaa ayaa rasaaseeyay gaari uu la socday Haashim Maxamed Salaad, oo ah gudoomiyaha Waaxda Barwaaqo degmada Hilwaa ee Gobolka Banaadir iyo qaar kamid ah Ilaaladiisa kaasi oo marayay Xaafadda Carta. Inta la xaqiijiyay waxaa falka ku dhaawacmay Gudoomiyaha Waaxda Haashim iyo qaar kamid ah Ilaaladiisa. Goobta weerarka ...
Dr Ka Howlgala Isbitaalka Digfeer oo Lagu Dhaawacay Magaaladda Muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dhaqtar ka howlgala Isbitaalka Urdugan Ex Digfeer ee Magaaladda Muqdisho oo galabta la dhaawacay. Dr. Cabdixaliim oo ah dhaqtar ka howlgala Isbitaalka Erdogan (Ex-Digfeer), isla markaana qaabilsan caruurta ayaa lagu dhaawacay agagaarka Maqaayada Beder oo ku dhow Isgoyska Zoope ee Magaaladda Muqdisho. Sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal Dhaaawaca Dr. Xaliim Maxamuud ayaa ka dhashay ...
Shabaab oo Dil Ugu Hanjabay Xildhibaanadda Baarlamaanka
Xarakadda Alshabaab ayaa sheegatay Mas’uuliyadda dilka Ala Ha u Naxariistee Xildhibaan Cusmaan Cilmi Boqorre oo shalay lagu dilay Magaaladda Muqdisho. Qoraal kasoo baxay Al-shabaab oo lagu baahiyay Warbaahinta Andulus ayaa lagu sheegay in dagaalyahano ciidanankooda ka Tirsan ay xildhibaanka ku khaarijeen Xaafadd kamid ah Degmadda Kaaraan ee Gobolka Banaadir. Shabaab waxa ay Sheegeen in ragii fuliyay weerarka ay Si Nabadd ...